Miss Zimbabwe UK set to bounce back under new management – Nehanda Radio
By Nehanda Radio On Nov 23, 2016 595
Zimbabwean Radio and TV Presenter Kevin Ncube seen here at the 2016 Zimbabwe Fashion Showcase run by Chiedza Dawn Ziyambe (centre).
A letter from the Miss Zimbabwe Trust seen by Nehanda Radio says the UK licence has been awarded to the Zimbabwe Fashion Showcase run by Chiedza Dawn Ziyambe.
The founder of the Miss Zimbabwe Trust, Mr Crispen Sachikonye said they had taken the decision “to improve the quality of the Miss Zimbabwe Contest” and that “new licensees to host the preliminaries to the contest will be appointed worldwide.”
Other licensees that are going to being issued will be for Miss Zimbabwe USA, Miss Zimbabwe Canada, Miss Zimbabwe South Africa and Miss Zimbabwe from within Zimbabwe. Mr. Sachikonye said that only contestants from these licensed contests, or those directly sanctioned by the Trust, will have a chance of becoming Miss Zimbabwe.
Oct 3, 2019 6,939
Sep 11, 2019 9,875
Mar 5, 2019 6,140
Feb 24, 2019 20,948
Oct 4, 2018 16,820
May 28, 2017 4,266
“Besides improving the quality of the contest, this move will help unify Zimbabwean efforts to market the country and its people. It is also part of a wider effort to develop a contest that reflects Zimbabwe more accurately,” Sachikonye said. Nehanda Radio
Chiedza Dawn ZiyambeCrispen SachikonyeMiss Zimbabwe UKZimbabwe Fashion Showcase